China ZR-2021 Large flow airborne microbe sampler ifektri abakhiqizi | UJunray
US $ 15,000-30,000 / Ucezu
I-ZR-2021 i-sampler microbe sampler sampler sampler ingasetshenziswa njengemishini ekhethekile yokuqapha ezemvelo yizikhungo zokuqapha eziqeqeshiwe, izikhungo zokulawula izifo, izibhedlela, neminyango yokuvikela imvelo, futhi ifaneleka kakhulu ekuqapheni ukuphepha kwezinto eziphilayo ezindaweni ezibalulekile njengokuhlolwa kwezokuphepha esikhumulweni sezindiza kanye izikhungo ezinkulu zezingqungquthela.
I-Ultra egxila futhi ihlukanise ubuchwepheshe, yazi ukugeleza kokugeleza okukhulu nokugeleza okuncane kokungena.
Ukulawulwa okuphezulu kokugeleza kwe-elekthronikhi, bona ukulawulwa kokugeleza okunembile okungu-3.
Isikhathi esifushane sokusampula, ukusebenza kahle okuphezulu.
Ingcindezi ephezulu engemihle, fan enkulu yokushintshanisa, isisusa esinamandla, umsindo ophansi.
Isikrini sokuthinta esingu-5 intshi, okuqukethwe kuyinkimbinkimbi futhi ukusebenza kulula.
Idizayini ephathekayo, umphathi wesampuli kanye nesampuli egxilile ingahlukaniswa futhi ihlanganiswe.
Sekela iphrinta yangaphandle enejubane eliphezulu le-Bluetooth.
Sekela ukuthekelisa idatha ye-USB, yakhela ngaphakathi isitoreji sedatha yomthamo omkhulu.
Ukuvikelwa okuzenzakalelayo ngesikhathi sokusampula, qhubeka nesampuli ngemuva kokuxhuma kabusha emandleni.
Iphutha Eliphezulu Elivunyelwe (MPE)
Isampula flow of A 924L / iminithi 1 L / min ± 2.5%
Isampula flow of B 77L / iminithi 1 L / min ± 2.5%
Isampula flow of C 7L / iminithi 0.1 L / iminithi ± 2.5%
Ingcindezi ngaphambi kwe-flowmeter (-30 ~ 0) kPa 0.01 kPa ± 2.5%
Izinga lokushisa ngaphambi kwe-flowmeter (－20 ~ 150)℃ 0.1℃ ± 0.5 ℃
Ukusebenza kwamandla AC220V ± 10% 50Hz
Ukushisa okusebenzayo -20 ~ 45 ℃
Ingcindezi yemvelo （60 ~ 130） kPa
Ukusetshenziswa kwamandla komgcini
Usayizi we-Host （Ubude 380 × ububanzi 240 × ukuphakama 285） mm
Isisindo somsingathi Cishe ngo-9㎏
Langaphambilini I-ZR-2050A sampler yegciwane le-Airborne
Olandelayo: Isivivinyo seMask Bacterial Filtration Efficiency (BFE)
I-Airborne Microbe Sampler
I-Microbe Sampler Entantayo
Isilinganiso Esikhulu Sokugeleza Komoya Sampler